အင်တာနက်သုံးတိုင်း adobe product အားလုံး serial number ထပ်ထပ်တောင်းနေတာကို ဘယ်လို block လုပ်ရမလဲ
ကဲမေးထားတဲ့သူတွေက များနေတော့ ကျွန်တော် ဖြေပေး လိုက်ပါတယ်. မေးလ်နဲ့မေးထားတာ 8 ယောက်နဲ့ chat box ထဲမှာ2ယောက် မေးထားပါတယ်. စုစုပေါင်း 10 ယောက်ပါ။ တစ်ခြားသူတွေလဲ မမေးပေမယ့် သိချင်နေကြ လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. လုပ်နည်းကို အသေးစိတ် video ဖိုင်နှင့် ရှင်းပြထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အားလုံး အသေးစိတ် နားလည် လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.လုပ်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်. C:/windows/system32/drivers/etc ထဲကိုသွားပါ။အထဲမှာ "hosts" အမည်နဲ့ ဖိုင်ကိုရှာပါ။ပြီးတာနဲ့ အောက်ဆုံးပေးထားတဲ့ link တွေကို အစားထိုးပြီးထပ်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
127.0.0.1 activate.adobe.com127.0.0.1 practivate.adobe.com127.0.0.1 adobeereg.com127.0.0.1 www.adobeereg.com127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com127.0.0.1 wip3.adobe.com127.0.0.1 125.252.224.90127.0.0.1 125.252.224.91
ခုပြောတာကို ရှင်းတဲ့သူများအနေဖြင့် ချက်ချင်းလုပ်နိုင်သလို နားမလည်သူများ၊ မရှင်းလင်းသူများ၊ အမှားတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်မှာ စိုးရိမ်သူများကတော့ အောက်က adobe indesign cs5.5 နဲ့ adobe photoshop cs6 နှစ်ခုကို ဥပမာထားပြီးတော့ အစကနေ အဆုံးအထိ အသံနဲ့ပါ ရှင်းပြထားတဲ့ video ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ ရှင်းပြထားတာနဲ့ လုပ်ပြထားတာဟာ product နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ဖိုင်ဆိုက်ကတော့ 52 MB လောက်တော့ ရှိပါတယ်။ အသေးစိတ်လုပ်ပြပြီး ဘာ့ကြောင့် ထည့်ရတယ်ဆိုတာကိုပါ ရှင်းပြထားတဲ့အတွက် သိချင်သူများကတော့ အောက်မှာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ညီနေမင်း အသံကောင်းသည်ဆိုပြီး အဆိုတော်လုပ်ရန်တော့ မတိုက်တွန်းပါနဲ့. အဆိုတော်တွေ ကျွန်တော့် အသံကြားပြီးတော့ စားမ၀င်အိပ်မပျော်ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ. ဟီးဟီး . အားလုံးပဲ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. Mediafire
Part1 | Part2 | Part3 | Part4 | Part5 | Part6 Read More
Ram 8 GB ထည့်ထားတာတောင် ဘာလို့ memory နည်းနေကြောင်း error ပြရသလဲ
pyaephyoe : အစ်ကိုရေ ကျွန်တော် Ram က 8 GB ထည့်ထားတာပါ. အဲ့ဒါ (2.37 GB usable)အစ်ကို တင်ပေးထားတဲ့ photoshop cs6 နဲ့ တစ်ခြား program တွေ သုံးလိုက်တိုင်း memory နည်းနေတယ်ချည်းပဲ စာတမ်းပေါ်ပေါ်လာပြီး သတိပေးနေတယ်. ကူညီပါဦး. ram ကို အပြည့်သုံးလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ. graphic လဲဆိုက်ထားပါတယ် . 512 mb ပါ.
ညီလေးရေ window7ကို 32 bit ကနေ 64 bit ကို ပြောင်းပြီးသုံးလိုက်ပါ. အဲ့ဒါ ဆိုရင် ညီ့ရဲ့ ram 8 gb ဟာ အပြည့်သုံးလို့ ရသွားပါလိမ့်မယ်. အခု အစ်ကို အင်တာနက်က တွေ့တဲ့ပုံကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်. နောက်တစ်ခါ ညီလေး မေးချင်တယ်ဆိုရင် screen short ရိုက်ပြီးပို့ပေးပါ. အဲ့ဒီ့အတွက်လည်း အစ်ကို ပို့စ်တင်ပြီးပြောပြီးသားပါ. တစ်ခြားသူတွေ ဓါတ်ပုံနဲ့ တစ်ခါတည်း တွဲပြီး မြင်စေချင်လို့ပါ. ဘာ့ကြောင့် 32 bit မှာ ram 8 GB အပြည့်မရသလဲဆိုတာကတော့ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် အသေးစိတ် ရေးပေးပါဦးမယ်. အဓိကပြောချင်တာကတော့ 32 bit မှာ ram ကို ကန့်သတ်ထားလို့ပါ. Read More
pyaezonehein@ : အရင်တစ်ခါ Gtalk ကိုဘယ်လိုဖွင့်လို့ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ စာတစ်စောင် ပိုဖူးပါတယ်... အစ်ကိုစာမပြန်ပါ.. အခုဟာကတော့ ကျနော် Folder Lock ကိုသုံးပြီးတော့ လော့ချလိုက်တာ. ပြန်ဖွင့် မရတော့ လို့အဲဒါ ဘာလုပ်ရမလဲ အစ်ကို.. သုံးလိုက်တာက FolderLOCK.exe ပါ version 1.0.0.0 တဲ့ ဒေတာတွေကအရေးကြီးတာတွေမိုလို့ပါ....
ညီရေ အခု folder lock 6.6.5 ကို ကီးတော်တော်များများနှင့် တွဲပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်. အခု အကို တင်ပေးလိုက်တဲ့ ကီးတွေက အသစ်များဖြစ်သည့်အပြင် အများအပြား တင်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေမှာပါ. ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ ကြိုပြီးပြောပါရစေ. folder lock software ဟာ အင်တာနက်ချိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ update လုပ်ဖို့ လှမ်းချိတ်ပါတယ်. အဲ့အချိန်မှာ အစ်ကိုတင်ထားတဲ့ folder lock ဟာ လူသုံးအရမ်းများပြီးတော့ register လုပ်မထားတဲ့ (တနည်းအားဖြင့်) မ၀ယ်ထားတဲ့ serial number ဆိုရင်တော့ သူက Block လုပ်ပစ်ပါတယ်. အခု တင်ပေးလိုက်တာဟာ ညီ့ရဲ့ software တွေကို ပြန်ရဖို့အတွက် သက်သက်သာ တင်ပေးလိုက်တာပါ. ထပ်သုံးတာ မသုံးတာတော့ ညီနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်. folder ကို lock ချဖို့အတွက် သီးသန့် software တွေလည်းပဲ ရှိပါတယ်. အကယ်လို့များ အစ်ကို့အနေနဲ့ ဒီ software ကိုပဲ သုံးချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ကီးတွေ ဘေးဖက်နားမှာ ထပ်တင်ပေးထားပါ့မယ်. ဖြစ်တဲ့အခါ ကီးအသစ်ထပ်ထည့်လိုက်ပေါ့. တစ်ခုတော့ သတိထားပေါ့. ကီးအသစ်ထည့်တဲ့အချိန်မှာ အင်တာနက်ကိုတော့ ခဏလေး ဖြုတ်ထားဖို့လိုပါတယ်.
internet download manager 6.08.8 နှင့် movie ရှင်းပြချက်
ကဲအောက်မှာ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကော မေးလ်နဲ့ပါ တောင်းထားတာတွေများလို့ လုပ်နည်းကို တစ်ခါတည်း video file နဲ့ပါ ရှင်းပေးထား ပါတယ်. အသံပါ ထည့်ပြီး ရှင်းထားတာဖြစ်လို့ နားလည် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. နောက်ဆုံး ထွက် version ပါပဲ. အောက်မှာ registration လုပ်တတ် တဲ့ သူတွေ အတွက်တော့ ရှင်းပြချက်က လိုမယ်မထင်ပါဘူး. မလုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် software ကော tutorial movie ဖိုင်ကိုပါ download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်. internet download manager 6.08.8 Softwareifile | mediafire | mirrorcreator
internet download manager 6.08.8 ကို registration လုပ်ပုံလုပ်နည်း video ဖိုင်ifile | mediafire | mirrorcreator Read More
Window xp, vista,7ကို USB stick နဲ့ window တင်မယ်
အသေးစိတ်ကိုတော့ video file အနေနဲ့ ရှင်းပြပြီးတော့ တင်ပေးပါ့မယ်. အခုလက်ရှိ window xp, vista, window7အတွက် software ၄ မျိုးကို နာမည်တွေနဲ့ ခွဲပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အခုတင်ပေးတဲ့ software တွေကတော့ DVD (or) CD drive မပါတဲ့ ကွန်ပျူတာများနှင့် DVD (or) CD drive သိပ်ပြီး အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ ကွန်ပျူတာများကို USB stick နဲ့ window ကို boot တက်ဖို့အတွက် သုံးတဲ့ software တွေ ဖြစ်ပါတယ်. xp,vista,7 သုံးမျိုးကို software နှစ်မျိုးစီဖြင့် တင်ပေးထားပါတယ်. ကဲစမ်းကြည့်လိုက်ပါ. တင်ထားသမျှ software အားလုံးနှင့် နောက်တင်မည့် software လိုလိုကို ရှင်းပြချက်များနှင့် အတတ်နိုင်ဆုံးနားလည်လွယ်အောင်လို့ တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. အခုနောက်ပိုင်း တင်မည့်ဖိုင်များကို ပုံစံပြောင်းပြီးတော့ တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်. အခုနာမည်ကိုတော့ 000000.rar ဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်. အခုဒီ software ကနေ စမှာဖြစ်ပါတယ်. နောက်တင်မည့်ဖိုင်တွေအားလုံးကို download လုပ်မည့် ဖိုင်များကို ပြောင်းချင်လည်းပြောင်းပါမယ်. ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် format type ကို ပြောင်းပြီးတော့ တင်ပေးပါ့မယ်. ပြီးတော့မှ အဲ့ရောက်တော့မှ format type အမှန်ကို ပြန်ပြောင်းလိုက်ပေါ့. အခုအမေရိကန်က ထုတ်လိုက်တဲ့ copyright sharing နဲ့ ပတ်သက်ပြီး file sharing ဆိုက်တွေကို တစ်ခုချင်းစီ လိုက်ပိတ်ဖို့ရှိပါတယ်. ပထမဦးဆုံး www.megaupload.com ကိုတော့ ပိတ်ပစ်ယုံတင်မကဘဲ တင်ထားသမျှ ဖိုင်များအားလုံးကိုပါ ဖျက်ပစ်လိုက်ပါပြီ. ဒုတိယဆိုက်ကတော့ www.filesonic.com ပါ. သူ့ကိုတော့ ပိတ်မပစ်ဘဲနှင့် လက်ရှိတင်ထားသမျှ ဖိုင်အားလုံးကို share အနေဖြင့် download လုပ်မရအောင် download ကို ပိတ်ပစ်ခိုင်း ထားပါတယ်. filesonic က ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို download လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ မူလတင်ထားတဲ့ ပိုင်ရှင်ရဲ့ username and password သိမှပဲ download လုပ်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်. ပိုင်ရှင်မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူတွေ အနေနဲ့ကတော့ ဘယ်လိုမှ download လုပ်ခွင့်မရတော့ပါဘူး. ခုနောက်ပိုင်း ဘယ်ဆိုက်တွေကို ဆက်ပိတ်မယ်ဆိုတာကို မသိသေးပါဘူး. ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး firefox နဲ့ wiki ကတော့ ဆန္ဒပြလိုက်ပါတယ်. ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ဥပဒေသာ အတည်ပြုပြီး တရားဝင်သတ်မှတ်လိုက်ရင်တော့ အခုလက်ရှိ နာမည်ကြီး file sharing ဆိုက်အားလုံးလိုလိုနီးပါး ပိတ်ပစ်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဘယ်ဆိုက်တွေ လာမယ်ဆိုတာတော့ မသိသေးပါဘူး. ကျွန်တော်တောင်မှ premium account ကို ဘယ်ဆိုက်ကနေမှ မ၀ယ်တော့ပါဘူး. အရင်က megaupload နဲ့ filesonic ကတော့ ၀ယ်ထားတာ အလကားဖြစ်သွားပါတယ်. တကယ်တော့ megaupload ဆိုက်ဟာ တင်တဲ့သူအများဆုံးနှင့် file တစ်ဖိုင်ရဲ့ Download လုပ်နိုင်ဖို့ သိမ်းဆည်းပေးထားတဲ့ သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ဆိုက်တစ်ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်. ဆိုက် ၁၀ ဆိုက်တင်ပေးထားရင် တစ်ခြားဆိုက်တွေက ဖိုင်တွေပျက်သွားတတ်ပေမယ့် megaupload ဆိုက်ကတော့ ကျန်နေတတ်ပါတယ်. အခုလက်ရှိတော့ ကျွန်တော် ifile.it | Mediafire နှင့် mirrorcreator အဲ့ဆိုက် သုံးခုကနေ တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ပိုင်းကတော့ ဘယ်လိုစခန်းသွားရမယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားထားပြီးသားပါ. စိတ်မပူပါနဲ့. ကဲ ခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ software တွေကို download လုပ်လိုက်ပါဦး. လုပ်နည်းတွေကို video file အနေနဲ့ တင်ပေးသွားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်. ဖိုင်ဆိုက်လည်း သေးရမယ်. နောက်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားမှု့လည်းရှိရလေအောင် တင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အသံနဲ့ ရှင်းပြချက်ဖိုင်ကို လုပ်ပြမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်. Download ifile | Mediafire | Mirrorcreator Read More
robin.9909@gmail.comးကျတော်router Tp link model TL-WR941ND အမျိုးအစား သုံးထားပါတယ်။ ကျတော်ကအပြင်ကို ပြန်ပြီးလွှင့်ပါတယ်။ ကျတော်မသိတဲip တွေ ၀င်လာပါတယ် ကျတော်ကတော့ ပိတ်ထားချင်ပါတယ်။ mac address ကိုrouter ထဲမှာထည်ပြီး ပိတ်ထားလဲ မရပါဘူး။ ဘယ်လိုပိတ်ရင်ရပါလဲ။ ဆောဝဲလေးရှိရင်ကူညီပါအုံး။ router ထဲမှာ ဘယ်လိုပိတ်ရလဲ ဆိုတာကိုလဲ ပြောပေးပါနော်
ကျွန်တော် wifi ဖောက်နည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပို့စ်မတင်တာ အဲ့ဒါတွေ ပါပါတယ်. ခုအချိန်အထိလည်းပဲ သူများ လွှင့်ထားတဲ့ wifi password ခံထားရင် ဘယ်တုန်းကမှ မဖောက်ခဲ့ဖူးပါဘူး. wifi ကိုဖောက်ဖို့ စမ်းတုန်းကတောင်မှ ကို့သူဌေး လွှင့်ထားတဲ့ wifi ကိုပဲ laptop အသစ်နဲ့ ဖောက်ခဲ့ဖူးတာပါ. ဒါဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ပေးထားပြီးသား password ပါပဲ. ရမရ အောင်မြင်/မအောင်မြင် သိချင်ယုံစမ်းတာပါ. ကျွန်တော်အင်တာနက်ကို ခုအချိန်အထိ ပိုက်ဆံပေးပြီး ဆိုင်မှာ သုံးချင်ရင် သုံးမယ် မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းလိုင်းနဲ့ သုံးပါတယ်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် သူတို့တွေက ပိုက်ဆံပေးပြီး လိုင်းဝယ်ထားတယ် ကိုက လက်အငြိမ်မနေပဲ download ဆွဲမယ့်သူလေ. အဲ့တော့ သူတို့ဖက်မှာ လိုင်းတွေ ကျသွားတာပေါ့. အဲ့ဒီ့အတွက်ကြောင့် သူများလွှင့်တဲ့လိုင်းကို မသုံးဖြစ်တာပါ. တစ်ချို့တွေက နားမလည်ဘဲနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ သုံးစေချင်လို့ wifi ကို ဖွင့်ပေးထားပါတယ်. setting ထဲကိုဘယ်လို ၀င်ရမယ် ဘယ်လိုပြင်ရမယ်ဆိုတာကို နားမလည်ကြပါဘူး. အဲ့လို နားမလည်တဲ့သူတွေကို နားလည်တဲ့သူတစ်ချို့က သူ့ရဲ့လိုင်းထဲကိုဝင် ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ Default IP ကို ပြောင်းတယ်. Default username နဲ့ Default password ကိုပါ ပြောင်းလိုက်ပါတယ်. ဟိုက နားမလည်တော့ ဘာမှ မလုပ်တတ်တော့ဘူးပေါ့. အဲ့ဒီ့အတွက် ပို့စ်သီးသန့်ရေးပေးပါ့မယ်. ယခုလက်ရှိ ကျွန်တော် သုံးနေတာက Hongdian အမျိုးအစား 3G rounter ကို သုံးနေပါတယ်. ညီလေးရေ အောက်က နည်းအတိုင်း စမ်းကြည့်လိုက်ပါ.
ညီလေးရဲ့ TL-WR941ND အမျိုးအစားရဲ့ IP, Username, Password ကိုအောက်မှာ ပေးထားပါတယ်.
TL-WR941ND Default Password:admin
TL-WR941ND Default Username:admin ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံး IE(internet explorer) ဒါမှမဟုတ် firefox စတဲ့ browser တစ်ခုခု ဖွင့်လိုက်ပါ. ညီလေး firefox browser ရှိလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်. အဲ့တော့ အဲ့ဒီ့ browser မှာ 192.168.1.1 ဆိုပြီးတော့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ. Username နဲ့ password တောင်းပါလိမ့်မယ်. အပေါ်မှာပေးထားသလို စာလုံးအသေးနဲ့ပဲ username = admin, password = admin ဆိုပြီးတော့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ. အဲ့ဒါဆိုရင် ညီလေးရဲ့ rounter setting ထဲကို ရောက်သွားပါပြီ. ညီလေးအနေနဲ့ အဲ့ဒီ့အထဲမှာ ၀င်ပြီးတော့ ပြင်ကြည့်လိုက်ပါ. အဲတကယ်လို့ 192.168.1.1 နဲ့လုံးဝ ၀င်မရတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ယောက်က အပေါ်ကပြောထားသလိုမျိုး ၀င်ပြင်ပြီး ပြောင်းသွားပြီလို့ မှတ်လို့ရပါတယ်. ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့. rounter ကို Default reset ချလို့ရပါတယ်. ညီလေးရဲ့ rounter ရဲ့နောက်နားမှာ သွားကြားထိုးတံလောက်ရှိတဲ့ အပေါက်လေး ပါပါလိမ့်မယ်. များသောအားဖြင့်တော့ အပေါက်အောက်မှာ DEF လို့ရေးထားတတ်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် rounter အမျိုးအစားနဲ့ ရေးသားတဲ့စာသားချင်း မတူညီနိုင်ပေမယ့် အပေါက်ကတော့ အတူတူပါပဲ. အဲ့ဒီ့ အပေါက်ထဲကို အပေါက်နဲ့ဆံ့တဲ့ တုတ်တံတစ်ချောင်းကို 1 မိနစ်လောက် မလွတ်ဘဲနဲ့ ထိုးထားလိုက်ပါ. တစ်မိနစ် ပြည့်သွားတာနဲ့ ပြန်လွှတ်လိုက်ပါ. အဲ့ဒါဆိုရင် ညီလေးရဲ့ rounter ကို ပြောင်းထားတဲ့ rounter ip, username, password အားလုံးက မူရင်းအတိုင်းဖြစ်သွားပါပြီ . မူရင်းအတိုင်းဆိုတာက အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်းပါ. အပေါ်က ပေးထားတဲ့အတိုင်း ပြန်ဝင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. TL-WR941ND Default IP:
admin TL-WR941ND Default Password:admin
ကဲကျန်တာကတော့ ကိုယ့်ဟာကို ပေးချက်တဲ့ Default IP:, ပေးချင်တဲ့ Default Username နဲ့ ပေးချင်တဲ့ Default Password ကိုသာပေးလိုက်ပါ . ပြီးတာနဲ့ ကိုလွှင့်လိုက်တဲ့ wifi password ကို ကိုပေးချင်တဲ့ password ကိုပေးပြီး save လုပ်လိုက်ပါ. အစ်ကို့မှာ ညီလေးအမျိုးအစား rounter မရှိတဲ့အတွက် အသေးစိတ် မရေးပေးနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး. ဒါပေမယ့် အချိန်ရတယ်. ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့ ညီ့ရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲကို ခဏ၀င်ပြီးတော့ ကြည့်ပေးပါ့မယ်. ဒါပေမယ့် အစ်ကို့ရဲ့ ဆိုက်မှာ တင်ဖို့အတွက် screen short တော့ ရိုက်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်. screen short ရိုက်မယ်ဆိုတာက ညီရဲ့ အမှန် password နဲ့ အမှန် username ကို မရိုက်ပါဘူး. photoshop နဲ့ပြောင်းထားပေးမှာပါ. ပထမဦးဆုံး ၀င်ပြီးတော့ စမ်းစေချင်ပါတယ်. အရာရာတိုင်းဟာ စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ရှိမှ အတတ်မြန်တာပါ. စမ်းသာစမ်းပါ. rounter မပျက်စေရဘူးလို့ အစ်ကို အာမခံပါတယ်. ခင်မင်လျှက်ညီနေမင်း(နည်းပညာ)konyinaymin@gmail.com
အကူအညီတောင်းဆိုသူများ သိစေရန်ကျွန်တော့်ဆီကို အကူအညီတောင်းတဲ့သူများ အားလုံးနီးပါးကို အထူးမှာချင်တာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်. ဘာလဲဆိုရင် ကိုဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာကို စာနဲ့ပဲ မပို့ပဲနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးကို screen short ရိုက်ပြီးတော့ ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်. screen short ရိုက်တာ လွယ်လွယ်လေးပါ. ဘာမှမခက်ပါဘူး. မရိုက်တတ်တဲ့သူများအတွက် တစ်ခါတည်း သင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်. photoshop နဲ့မှ screen short ရိုက်လို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး. paint နဲ့လဲ screen short ရိုက်လို့ရပါတယ်. paint ဆိုတဲ့ program ဟာ window စတင်ကတည်းက ပါထားပြီးသား program ဖြစ်လို့ လူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်. photoshop နဲ့ကော paint နဲ့ပါ screen short ရိုက်နည်းကို ပြောပြပေးလိုက်ပါ့မယ် . နောက်တစ်ခါဖြစ်ရင်. ပုံလေးတွေနဲ့ ပို့ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်. Paint ဖြင့် screen short ရိုက်နည်း
ပထမဦးဆုံး paint program ကို ဖွင့်လိုက်ပါ.
window7မှာဆိုရင် start icon လေးရဲ့အထက်မှာ search program and file ဆိုတာရှိပါတယ်. အဲ့အကွက်ထဲမှာ paint ဆိုတဲ့ စာကို ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ paint program ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. paint ကိုဖွင့်ထားပါ. ဖြစ်နေတဲ့ error box ကို မြင်ရပြီဆိုတာနဲ့ Desktop သမားများက keyboard မှာ Print Screen SysRq ဆိုတဲ့ စာသားလေးရှိပါတယ်. Scroll Lock ရှိတဲ့အကွက်မှာပဲ ရှိတတ်ပါတယ်. အဓိက ကတော့ screen ဆိုတဲ့ စာသားပါပါလိမ့်မယ်. Keyboard တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး ရေးထားတာချင်း မတူညီလို့ပါ. အဲ့စာသားကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ. တစ်ချက်နဲ့ အားမရရင် နှစ်ချက်နှိပ်ပါ.
ပြီးတာနဲ့ paint program ကို ပြန်သွားပါ။
ctrl + v (or) လွတ်နေတဲ့ အဖြူရောင်အကွက်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ save (or) ctrl + s ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီ့မှာ Save as type အကွက်မှာ (.png, .gif, .jpg) အဲ့သုံးမျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးကိုရွေးပြီးတော့ သင့်တော်တဲ့နေရာမှာ save လုပ်လိုက်ပါ. ဒါဟာ paint နဲ့ screen short ရိုက်နည်းပါ. ပို့ပေးရမှာလည်းပဲ အဲ့ဒီ့ပုံပါပဲ.
Adobe photoshop ဖြင့် screen short ရိုက်နည်း Adobe photoshop ဖြင့် screen short ရိုက်နည်း
ပထမဦးဆုံး Adobe photoshop program ကို ဖွင့်လိုက်ပါ.
window7မှာဆိုရင် start icon လေးကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ photoshop ဆိုတဲ့ program ကို စတွေ့ပါလိမ့်မယ်. Adobe photoshop program ကိုဖွင့်ထားပါ.
ဖြစ်နေတဲ့ error box ကို မြင်ရပြီဆိုတာနဲ့ Desktop သမားများက keyboard မှာ Print Screen SysRq ဆိုတဲ့ စာသားလေးရှိပါတယ်. Scroll Lock ရှိတဲ့အကွက်မှာပဲ ရှိတတ်ပါတယ်. အဓိက ကတော့ screen ဆိုတဲ့ စာသားပါပါလိမ့်မယ်. Keyboard တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး ရေးထားတာချင်း မတူညီလို့ပါ. အဲ့စာသားကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ. တစ်ချက်နဲ့ အားမရရင် နှစ်ချက်နှိပ်ပါ.
ပြီးတာနဲ့ Adobe photoshop program ကို ပြန်သွားပါ။
ctrl + n (or) File >> new ကို နှိပ်လိုက်ပြီး page setup ပေါ်လာရင် enter ခေါက်လိုက်ပါ ပြီးရင် ctrl + v (or) လွတ်နေတဲ့ အဖြူရောင်အကွက်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်ပါ. ပြီးတာနဲ့ save (or) ctrl + s ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီ့မှာ Save as type အကွက်မှာ (.png, .gif, .jpg) အဲ့သုံးမျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးကိုရွေးပြီးတော့ သင့်တော်တဲ့နေရာမှာ save လုပ်လိုက်ပါ. ဒါဟာ Adobe photoshop နဲ့ screen short ရိုက်နည်းပါ. ပို့ပေးရမှာလည်းပဲ အဲ့ဒီ့ပုံပါပဲ. Laptop သမားများအတွက်ကတော့ အတိုကောက်အနေနဲ့ PRT SC SYSRQ ဆိုပြီးတော့ ပါလာတတ်ပါတယ်. အဲ့လိုပါလာတဲ့ ကီးကို နှိပ်ရမှာပါ. နှိပ်တဲ့အခါမှာ function key လို့ခေါ်တဲ့ FN ဆိုတဲ့ ကီးကို အရင်နှိပ်ထားပြီးမှ PRT SC SYSRQ ဆိုတဲ့ ကီးကိုနှိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. FN + PRTSC SYSRQ ပါပဲ. ဘာမှမထူးပါဘူး. လုပ်နည်းက အတူတူပါပဲ. အဲ့တော့ နောက်ပြဿနာလေးများဖြစ်မယ်ဆိုရင် screen short လေးရိုက်ပြီးပို့ပေးကြပါ. တစ်ချို့က ကွန်ပျူတာထဲကို ၀င်ပြီး ကူညီပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ ဆက်ပြီးတော့ စကားမပြောတော့တဲ့ သူတွေရှိပါတယ်. တော်တော်တော့ ရယ်ရတယ်ဗျ. အလုပ်မအားတဲ့ကြားကနေ ကူညီပေးမယ်ဆိုတာတောင်. ကွန်ပျူတာထဲ ၀င်မယ်ဆိုတာနဲ့တင် ဘာကိုကြောက်တယ် မဆိုနိုင်ပါဘူး. ရပါပြီအစ်ကို ကျွန်တော့်ဟာကျွန်တော် လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီး စကားမဆက်တော့ပါဘူး. ကဲ ကျွန်တော် ဆိုလိုချင်တာကတော့ ပုံလေးတွေနဲ့ ပို့ရင် နောက်လူတွေလဲ သိအောင် ကျွန်တော်လဲ ဘာ error လဲဆိုတာသိအောင်လို့ သက်သေသာဓကနဲ့ ဖြစ်သွားအောင်လို့ ပို့ခိုင်းလိုက်တာပါ. .............................................. tarzan.villane09@gmail.comးကိုညီနေမင်းခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကို kaspersky antiviurs 2012 keygen ကို download ဆွဲတာမရလို့ပါခင်ဗျာ အဲဒါကိုညီနေမင်း ကျွန်တော်ကို အကူညီလေးတစ်ခုလောက်ပေး ပါလားခင်ဗျာ.. ကျေးဇူး တင်ပါတယ်....
ညီလေးရေ keygen လို့တော့ တင်ပေးတာ မတွေ့မိသေးပါဘူး. တွေ့ရင်လည်းပဲ trojan နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ program တစ်ခုလို့ပဲ အစ်ကို့အနေနဲ့တော့ ယူဆမိပါတယ်. အန္တရယ်အကင်းဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ key ဖိုင်တွေကို အမြဲတမ်း update တင်ပေးနေတာကို ဘာ့ကြောင့် keygen ကို လိုချင်တာလဲဆိုတာကိုတော့ ကိုမသိပါဘူး. ဒါပေမယ့် ညီလိုချင်တဲ့ keygen ကို ရှာပေးလို့ရပါတယ်. window os ပါ ဒေါင်းသွားတာမျိုး virus ၀င်သွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ အစ်ကိုတာဝန် မယူနိုင်ပါဘူး. ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် အစ်ကို့ရှေ့မှာ ရက်ပေါင်း 3600 ကျော် crack တစ်ခုကို ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကနေ ရောင်းလိုက်ပါတယ်. ကိုစစ်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာ trojan နဲ့ပေါင်းပြီး virus အဖြစ် ဖန်တီးထားတာ တွေ့ရပါတယ်. ထည့်ပြီးပြီးချင်းတော့ update လုပ်လို့ရပါသေးတယ်. 100% ပြည့်သွားလို့ window ကို restart တောင်းလိုက်လို့ ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ window တက်မလာတော့ပါဘူး. အဲ့ဒါ ကို့ဆီကိုိလာတဲ့ customer တစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပါ. ကိုတားပါသေးတယ်. ညီလေး ၃ လကျော် ၄ လလောက်အထိ အစ်ကိုရက်ကို ရှာပေးပြီး ထည့်ပေးပါ့မယ်. ဒီ crack ကိုတော့ မထည့်စေချင်ပါဘူးဆိုတော့. ဆိုင်က အစ်ကိုက ရက်ပေါင်း 3600 ကျော်ရှိတယ်လို့ အသေအချာပြောလိုက်ပါတယ်အစ်ကို ထည့်သာထည့်လိုက်ပါလို့ပြောပါတယ်. တားပေမယ့် မရတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ့ crack ကို ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်. ရက်ပေါင်း 3600 ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူ့စက်ကို ပြန်ယူသွားပြီး နောက်နေ့ ကွန်ပျူတာ ၀င်းဒိုး တက်မလာတဲ့အကြောင့် လာပြောပါတယ်. အစကတည်းက ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုသိလို့ တားပေမယ့် မရတဲ့အတွက် လုပ်ပေးလိုက်တာပါ. ကျွန်တော့်မှာ အပြစ်ကင်းတယ်လို့ ယူဆပါတယ်. ဒါပေမယ့် သူ့ကို သင်ခန်းစာ ရသွားစေချင်တဲ့ သဘောပါပဲ. ကျွန်တော် window အသစ်ပြန်တင်ပေးပြီး အကုန်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်. တစ်ပြားမှ မယူလိုက်ပါဘူး. အဲ့တော့ ဒီသင်ခန်းစာလေးကို ယူစေချင်ပါတယ်. မယုံရင် keygen ချည်းပဲသတ်သတ် google ကနေ ရှာကြည့်လိုက်ပါ. ဆိုက်တော်တော်များများဟာ kaspersky internet security က blacklist သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိုက်တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်. Read More
စိုးမြန်မားကိုညီရေ CyberLink PowerDVD player ကောင်းကောင်းလေးရှိရင် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်. လိုက်ရှာတာလည်း မတွေ့လို့ပါ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ကိုစိုးရေ တင်ပေးလိုက်ပါပြီ. အထဲမှာ လိုင်စင်ဗားရှင်းလုပ်ဖို့အတွက် တစ်ခါတည်း ပါပြီးသားပါ. စမ်းပြီးမှ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. သူကတော့ အားသာချက်တစ်ချက်ပါပါတယ်. 3D မျက်မှန်ရှိရင် 3D ပါ ကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့. ကဲအဆင်ပြေ ပါစေဗျာ လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။
Download ifile | Mediafire | Mirrorcreator Read More
အစ်ကို့အထင်တော့ ညီမက internet explorer ကို သွားသုံးနေတယ်ထင်တယ်. ကိုပြောပြလိုက်တဲ့ အချက်တွေကိုသာ ပြင်လိုက်ပါ . ညီမ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်. အဲ့ဒီ့ ပြဿနာအဖြစ်အများဆုံးကတော့ IE လို့ခေါ်တဲ့ internet explorer ကနေ Times New Roman (or) တစ်ခြား font တစ်ခုခုကို ရွေးထားပြီး browser ကို Default ယူထားလို့ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာပါ. အဲ့ဒီ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Mozilla Firefox ကို Default browser အဖြစ် ပြန်ယူလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ. အဲ့တော့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ Firefox ကို တင်လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းက Mozilla Firefox browser ကို default ထားမှာလားမေးတုန်းက default မထားခဲ့လို့လဲဖြစ်တတ်ပါတယ်. တစ်ခါတစ်ရံ default ထားထားတာတောင်မှ IE နဲ့ gtalk နဲ့ လာငြိတတ်ပါတယ်. ကဲလုပ်ရမှာလေးကို ပြောပြပေးပါ့မယ်.သေချာသွားအောင်လို့ ၃ နေရာပြင်ပါမယ်. ၁။ Internet explorer (IE) ကိုဖွင့်လိုက်ပါ
ဇင်ယော်မောင်းအစ်ကိုညီနေမင်းခင်ဗျာ converter ထဲမှာ Any Video Converter လေးက format တော်တော်လေးစုံပြီးတော့ လုပ်လို့လည်း အရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်. ကျွန်တော်က mp3/mp4 တွေဘာတွေ သွင်းပေးပါတယ်. အဲ့တော့ နောက်ဆုံးထွက် version လေးများ ရှိရင် ကူညီပေးစေချင်ပါတယ်. ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါပြီ. ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီးတော့မှ တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ဟုတ်ပါတယ်. Any Video Converter လေးကို ကျွန်တော်လည်း သုံးဖြစ်ပါတယ်. တော်တော်လေး အဆင်ပြေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ. ဒါပေမယ့်လို့ သီချင်းသွင်းစားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ converter အနည်းဆုံး ငါးမျိုးလောက်တော့ ရှိထားသင့်ပါတယ်. ဒါမှ တစ်ခုနဲ့ အဆင်မပြေရင် နောက်တစ်ခုနဲ့ လုပ်လို့ရမှာပါ. တစ်ခါတစ်ရံကြုံရတတ်ပါတယ်. လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်. ထုံးစံအတိုင်း mediafire နဲ့ ifile ကနေပဲ တင်ပေးထားတာပါ. အခုတော့ megaupload, filesonic, ziddu တို့တော့ သွားရှာပါပြီ. နောက်ထပ် ဆိုက်တွေကိုလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ အလှည့်ကျလာမှာပါ. ifile နဲ့ mediafire ကတော့ ဘယ်နေ့ အလှည့်ကျမယ်မသိသေးပါဘူး. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းပညာဖြန့်ဝေတဲ့နေရာမှာ တားဆီးပိတ်ပင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး. အခုလည်းပဲ အားလုံးက ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်. ကျွန်တော့်အထင်တော့ ပျက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်. တစ်ကယ်လို့ အခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ online ဥပဒေ အတည်ဖြစ်သွားလည်းပဲ တစ်နည်းနည်းနဲ့တော့ ဖြန့်ဝေကြမှာပါပဲ. နည်းလမ်းပဲ ကွာသွားမှာပါ. ရပ်တန့်တဲ့အထိတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး. စိတ်မပူပါနဲ့. နှမျှောစရာကောင်းတာက ကျွန်တော် megaupload နဲ့ filesonic ကိုမှ သွားဝယ်မိလျက်သားဖြစ်နေတာတော့ နည်းနည်းလေး ကံဆိုးသွားတယ်. အဲ့ဆိုက်နှစ်ဆိုက်နဲ့ လွတ်တဲ့ software တော်တော် ရှားပါတယ်. အဲ့ဒါကြောင့် စိတ်ကြိုက် download လုပ်လို့ရအောင်လို့ ၀ယ်လိုက်တာပါ. ခုတော့ ချိန်နေတုန်းပဲ မ၀ယ်သေးဘူး. ကဲအောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်. download လုပ်လိုက်ပါ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် software တွေကို နာမည်တွေနဲ့ မတင်ပေးတော့ပါဘူး. နံပါတ်တွေနဲ့ပဲ တင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်. Download ifile | Mediafire | Mirrorcreator
လင်းလက်မျိုးးအစ်ကိုရေ microsoft က ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ window 8 ဆိုတာက တစ်ကယ် microsoft က ထုတ်တာ မဟုတ်ဘူး. အတုကြီးလို့ပြောနေပါတယ်. edition version သဘောမျိုး လုပ်ထားတာတဲ့. အဲ့ဒါ ဟုတ်ပါသလား. တကယ် ထုတ်တာဆိုရင် microsoft က ပေးထားတဲ့ download link ကို လိုချင်ပါတယ်. တစ်ခြားဆိုက်တွေက ပေးထားတာ ကိုတော့ မပေးပါနဲ့. အဲ့ဒါမှ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖြေရှင်းရတာ အဆင်ပြေမှာ မို့လို့ပါ.
ညီလေးရေ အဲ့ဒါ microsoft company ကနေ ထုတ်တာ ဟုတ်ပါတယ်. ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ ဖတ်လိုက်ပါ. Direct download လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ Download လုပ်ယူလိုက်ပါ. အဲ့ဒါ microsoft က တင်ပေးထားတဲ့ link ပါပဲ. Read More
chittee : ကိုညီရေ သူများတွေ window mediaplayer တစ်ခုတည်းနဲ့ တစ်ခြား video file အားလုံးကို ဖွင့်လို့ရတယ်. အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲပြောပြပေးပါ ခင်ဗျာ .
ကိုချစ်တီးရေ အဲ့ဒါကတော့ k-lite code pack ကို install လုပ်လိုက်တာပါပဲ. ဘာမှတော့ သိပ်လုပ်စရာမလိုပါဘူး. install လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ format အားလုံးကို အမှန်ခြစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်. install လုပ်ပုံလုပ်နည်းနှင့် သုံးနည်းများကို video tutorial file တွေနဲ့ ရှင်းပြပေးပြီး တင်ပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်. အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ K-Lite code pack ကို သာ install လုပ်လိုက်ပါ format အားလုံးနီးပါးကို window media player တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖွင့်လို့ ရသွားပါလိမ့်မယ်. လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ.